LynTec ၏ NPAC သည်ကုန်ပစ္စည်းအသစ်ဆုကို WFX 2017 တွင်ရရှိခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2021 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » LynTec ရဲ့ NPAC WFX 2017 မှာနယူးကုန်ပစ္စည်း Award ဆုကိုဆွတ်ခူးရရှိ
LENEXA, ကံ - ။ နိုဝင်ဘာ 30, 2017 - LynTec, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံ, ဗီဒီယို, နှင့်အလင်းရောင်စနစ်များများအတွက်ဆန်းသစ်လျှပ်စစ်ပါဝါကိုထိန်းချုပ်ဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူ, အ NPAC Dallas ရှိ WFX 2017 မှာနယူးကုန်ပစ္စည်း Award ဆုနှင့်အတူအသိအမှတ်ပြုကြေညာခဲ့သည်။ ဒီဖြေရှင်းချက်အကောင်းဆုံးအဆောက်အဦး Automation သို့မဟုတ်စနစ်အမျိုးအစားအတွက်အကောင်းဆုံးအဆောက်အဦးစနစ်များကုန်ပစ္စည်း၏ဂုဏ်အသရေကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
The New ကုန်ပစ္စည်းဆုပေးပွဲကိုးကွယ်မှုပေါင်းစည်းမှုစက်မှုလုပ်ငန်းထိခိုက်အများဆုံးထူးချွန်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုနှစ်စဉ်စုဆောင်းခြင်းဖြစ်ကြသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းတရားသူကြီးမှာသူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှု၎င်း၏တစ်ဦးချင်းအရည်အသွေးတွေပေါ်တစ်ဦးချင်းစီ entry ကိုအသိအမှတ်ပြုကြသူတရားသူကြီးတစ်ဦးကအရည်အချင်းပြည့် panel ကို (ကိုးကွယ်မှု်ဆောင်မှုများမဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာများနှင့် WFX အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့နှင့် WFX စီမံခန့်ခွဲမှု၏ပုံမှန်အဖွဲ့ဝင်) ။
တစ်ဦးအဆင်သင့်-to-install, ကွန်ယက်များ, 80-amp, ပါဝါအဘို့အ 2RU ဖြေရှင်းချက်အစီအစဉ်နှင့် AVL စနစ်များကိုထိန်းချုပ် - - တစ်ဦးပြင်ပတွင်လျှပ်စစ်မလိုဘဲပေါ်တွင်စစ်မှန်သောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ထားတဲ့ "NPAC ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အဆိုပါထိန်သိမ်းအာဏာမှချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ပါတယ် အသင်းတော်များနှင့်အခြားစေတနာ့ဝန်ထမ်းပြေးအဖွဲ့အစည်းများအဘို့အောက်ခြေလိုင်း, "မာကုဆရာတော်, LynTec ဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားသည်။ "ဒီဆုက NPAC သာတင်ဆက်ပေးတယ်အဖြစ်, အထူးသဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကတိကဝတ် - နေ့စဉ်စစ်ဆင်ရေးဖြေလျော့နေချိန်မှာသူတို့ရဲ့ AV စနစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကာကှယျစောငျ့ရှောကျဖို့ဘယ်လိုပြန်ပြီးအဓိပ္ပာယ်။ "
LynTec ၏ NPAC သည်ရှုပ်ထွေးသောဒစ်ဂျစ်တယ်အသံစနစ်များကိုလွယ်ကူစွာပရိုဂရမ်တိုးချဲ့ထားသောအဆင့်နှုန်းများနှင့်အချိန်နှောင့်နှေးမှုများကိုစနစ်တကျတပ်ဆင်ရန်တစ်ခုတည်းသောအမြင့်ဆုံးဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်လျော်သောအစိတ်အပိုင်း boot-up နှင့်အလိုအလျောက်ပိတ်ခြင်းကိုအာမခံသည်။ NPAC ကိုမော်ဒယ်နှစ်မျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်သည် - 120V သို့မဟုတ် 240V နှင့် 20RU အခန်းတစ်ခုတွင် 2A circuit inputs လေးခုပါရှိသည် - 4RU system များမှတန်ဖိုးရှိသောထိန်သိမ်းနေရာချွေတာခြင်းနှင့်အတူယူနစ်များစွာချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်ခြင်းကိုဖယ်ရှားသည်။ onboard server မှတစ်ဆင့်ပေါင်းစပ်သူများသည်စက္ကန့်အပိုင်းအစမှ ၉၉၉ စက္ကန့်အပိုင်းအစများမှအဆင့်နှုန်းများကို ရွေးချယ်၍ over-voltage နှင့် under-voltage ကာကွယ်မှုအပြင် circuit တစ်ခုစီအတွက် auto shutdown ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ထိန်းချုပ်မှုဇုန်အမျိုးမျိုးတွင်အလင်းနှင့် AV စနစ်များအတွက်စံနမူနာယူထားသော၊ ယူနစ်သည်ထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာ protocol များ (HTTP, Telnet, sACN, DMX) နှင့်ရိုးရှင်းသောအဆက်အသွယ်ပိတ်ခြင်းများကိုလက်ခံသည်။
NPAC ၏မျက်နှာပြင်မှအသုံးပြုသူများသည်မည်သည့်ကွန်ပျူတာ၊ တက်ဘလက်သို့မဟုတ်လက်ကိုင်စမတ်စက်မှမဆိုသတ်မှတ်ထားသောဇုန်တစ်ခုစီ၏ protocol ကိုတပ်ဆင်ခြင်း၊ ပြootနာဖြေရှင်းခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်အသုံးပြုသူများသည်ဗို့အားမမှန်မှုများသတိပေးရန်စာသားသို့မဟုတ်အီးမေးလ်မှတဆင့်သတိပေးအကြောင်းကြားစာများလက်ခံရရှိနိုင်သည်။ NFPA မီးကုဒ်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါက၎င်းသည်အရေးပေါ်ပိတ်ဆို့ခြင်းအတွက် circuit-selectable load-shedding ကိုပြုလုပ်သည်။ onboard နက္ခတ္တဗေဒ timer သည် AVL စနစ်များအတွက်လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချ, လည်ပတ်မှုအလိုအလျောက်။
ထုတ်ကုန်များ၏ LynTec ရဲ့အပြည့်အဝလိုင်းပေါ်တွင်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.LynTec.com.
LynTec ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံ, ဗီဒီယို, နှင့်အလင်းရောင်စနစ်များများအတွက်ဆန်းသစ်လျှပ်စစ်ပါဝါကိုထိန်းချုပ်ဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ စနစ်ကဒီဇိုင်နာများနှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ကိုင်, LynTec တိုက်နယ် switching စွမ်းရည်လျှပ်စစ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆက်နွယ်နှင့်ဘုံဝင်းအတွင်းတစ်ဦးလည်ပတ် controller ကို - တန်ဖိုးရှိသောမြို့ရိုးကိုအာကာသချွေတာ installation ကိုကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချနှင့် system ရဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ် simplifying ။ လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်ဖြေရှင်းချက်မှဒီအ State-Of-The-Art ချဉ်းကပ်ရှုပ်ထွေးပါဝါထိန်းချုပ်လိုအပ်ချက်များနှင့်မဆိုတပ်ဆင်များအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရင်းအမြစ်အဖြစ် LynTec positioned သိရသည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.LynTec.com.
PR စနစ် Link ကို: www.ingearpr.com/LynTec/171130LynTec.docx
Image ကို Link ကို: www.ingearpr.com/LynTec/LynTec_NPAC_front.jpg
Image ကို Link ကို: www.ingearpr.com/LynTec/LynTec_NPAC_back.jpg
WFX17 အမှတ်တံဆိပ်: www.ingearpr.com/LynTec/WFX17_NP_Winner-Logo.jpg
တွစ်တာပေါ်မှာ Share: twitter.com/intent/[အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] NPAC သည် WFX 2017 တွင်ကုန်ပစ္စည်းအသစ်ဆုကို ၂၃% ၂၃ ဆပေးခဲ့သည် - bit.ly/2jz31qN
Facebook က: www.facebook.com/LynTec
YouTube ကို: www.youtube.com/user/LynTecPower
ပေါင်းစည်းမှု LynTec LynTec NPAC နယူးကုန်ပစ္စည်းဆုချီးမြှင့် WFX 2017 2017-11-30
ယခင်: Lawo mc²56အသံစက်များဟာဇူးရစ်နဲ့ Opera House က Upgrade
နောက်တစ်ခု: အခမဲ့နှစ်ပတ်လည်လုပ်ငန်းအသွားအလာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ VR / AR, HDR နဲ့ AI Technologies က Explore မှ ASG